I-Drostanolone (i-Masteron Enanthate) ipowder (472-61-1) ≥98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / I-Masteron Enanthate (Drostanolone) ipowder
Akukho kalo SKU: 472-61-1. Udidi: abanye
I-AASraw ihamba kunye nekhono lokuvelisa kwigram ukuya kwi-Drostanolone (i-Masteron Enanthate) ipowder (472-61-1), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Masteron Enanthate (Drostanolone) ividiyo ye powder
I-Masteron Inanthate (Drostanolone) i-powder eyisiseko Abalinganiswa
igama: I-Drostanolone (i-Masteron Enanthate) ipowder
Ifomula yeMolekyuli: C27H44O3
Ubunzima Ezinto: 416.64
I-Drostanolone (i-Masteron Enanthate) ukusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-Drostanolone Inanthate nayo (i-CAS 472-61-1) ibizwa ngokuba yi-Masteron E, iMastabol, iMast E, iMasto E, i-Drost E, ME, DE, njl.
Ukusebenzisa i-Drostanolone powder
I-100 mg / mL ibonakala ngokuqhelekileyo. Isilingo esicetywayo siya kuba yi-500-700 mg / iveki.
Isixwayiso kwi-Masteron Inanthate powder
I-Masteron yenza kakuhle kakuhle into ekufuneka yenze, kwaye inefuthe elibonakalayo elincinci le-side-effect njengokuba kunokwenzeka kwi-anabolic steroid. Andizange ndikwazi ukuba ubani odidekile ngale steroid, enikwe i-dosing eyaneleyo
I-Masteron nayo iyanceda ngokudibanisa ne-testosterone ye-hormone-replaction-alternative substitution (HRT.) Ngokomzekelo, i-100 mg / iveki nganye ye-Masteron kunye ne-testosterone inokuphakamisa izibonelelo zomzimba kwi-200 mg / iveki testosterone yodwa iziphumo ezibangelwa yimilinganiselo ephantsi ye-estradiol (estrogen) kunye ne-DHT.
I-Drostanolone powder (i-CAS 472-61-1)
Uku-odola okukhulu (ngaphakathi kwe-1kg) kunokuthunyelwa ngeentsuku ezintathu zomsebenzi emva kwentlawulo.
I-Drostanolone yokuThengiswa kwePowder
Indlela yokuthenga i-Masteron Inanthate powder (i-CAS 472-61-1); ukuthenga i-Drostanolone powder evela kwi-AASraw